direct message တွေကို user ဘက်မှဖျက်လိုက်သော်လည်း သိမ်းထားတဲ့ တွစ်တာ | Myanmar Mobile App
အသကျ ၆၅နှဈပွညျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ Steve Jobs
ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုဆီသို့နောကျထပျခွတေဈလှမျးတိုးလိုကျတဲ့ Netfilx ရဲ့ Top 10 feature
Home Trending App/Game direct message တွေကို user ဘက်မှဖျက်လိုက်သော်လည်း သိမ်းထားတဲ့ တွစ်တာ
direct message တွေကို user ဘက်မှဖျက်လိုက်သော်လည်း သိမ်းထားတဲ့ တွစ်တာ
deactivate ဒါမှမဟုတ် suspend ဖြစ်နေတဲ့အကောင့်တွေမှ၊ အကောင့်တွေဆီပို့ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
တွစ်တာက direct message တွေကို ကိုယ့်ဘက်မှာဖျက်လို့ရအောင်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ လက်ခံသူဘက်မှာတော့ ပေါ်နေဦးမှာပါ။ သူတို့ဖျက်လိုက်မှ ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလိုဖျက်ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေက တကယ်တမ်းမပျက်သွားပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ လုံခြုံရေးသုတေသီ Karan Saini က ပြောကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမက်ဆေ့ခ်ျတွေကို ဖျက်လိုက်တယ်လို့ပြောပေမယ့်လည်း တွစ်တာက နှစ်ပေါင်းများစွာ အဲဒီမက်ဆေ့ခ်ျတွေကို သိမ်းထားတုန်းပါပဲ။ ရုံးအတွင်းလူတွေအနေနဲ့ အဲဒီမက်ဆေ့ခ်ျတွေကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး deactivate ဒါမှမဟုတ် suspend ဖြစ်နေတဲ့အကောင့်တွေမှ၊ အကောင့်တွေဆီပို့ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေလည်း လှမ်းသုံးလို့ရနေပါတယ်တဲ့။
အခုဆိုရင်တော့ ဒါဟာ bugs မဟုတ်တော့ဘဲ တွစ်တာက သေချာလုပ်ဆောင်ထားသလိုကို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအချက်က လုပ်ငန်းအတွက်တော့ ကြည့်မကောင်းလှပါဘူး။ တွစ်တာက ဒီအကြောင်းကို သိထားပြီးတော့ ဒီအကြောင်းကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ လုပ်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာ ကြည့်နေပါတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တခုခုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ အာမခံထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒါဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတိုင်းက ပျောက်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာ မရှိကြောင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို သတိပေးနေသလိုပါပဲ။ ဖျက်လိုက်တယ်လို့ ပြောရင်တောင်မှပေါ့။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုတွေက . . .
deactivate ဒါမှမဟုတျ suspend ဖွဈနတေဲ့အကောငျ့တှမှေ၊ အကောငျ့တှဆေီပို့ထားတဲ့မကျဆခြေျ့တှလေညျး ပါဝငျနပေါတယျ။
တှဈတာက direct message တှကေို ကိုယျ့ဘကျမှာဖကျြလို့ရအောငျလုပျဆောငျထားပါတယျ။ လကျခံသူဘကျမှာတော့ ပျေါနဦေးမှာပါ။ သူတို့ဖကျြလိုကျမှ ပကျြသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အဲဒီလိုဖကျြထားတဲ့မကျဆခြေျ့တှကေ တကယျတမျးမပကျြသှားပါဘူး။ ဒီအကွောငျးကိုတော့ လုံခွုံရေးသုတသေီ Karan Saini က ပွောကွားထားတာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီမကျဆခြေျ့တှကေို ဖကျြလိုကျတယျလို့ပွောပမေယျ့လညျး တှဈတာက နှဈပေါငျးမြားစှာ အဲဒီမကျဆခြေျ့တှကေို သိမျးထားတုနျးပါပဲ။ ရုံးအတှငျးလူတှအေနနေဲ့ အဲဒီမကျဆခြေျ့တှကေို ဒေါငျးလုတျဆှဲပွီးတော့ အသုံးပွုနိုငျနပေါတယျ။ နောကျပွီး deactivate ဒါမှမဟုတျ suspend ဖွဈနတေဲ့အကောငျ့တှမှေ၊ အကောငျ့တှဆေီပို့ထားတဲ့မကျဆခြေျ့တှလေညျး လှမျးသုံးလို့ရနပေါတယျတဲ့။
အခုဆိုရငျတော့ ဒါဟာ bugs မဟုတျတော့ဘဲ တှဈတာက သခြောလုပျဆောငျထားသလိုကို ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီအခကျြက လုပျငနျးအတှကျတော့ ကွညျ့မကောငျးလှပါဘူး။ တှဈတာက ဒီအကွောငျးကို သိထားပွီးတော့ ဒီအကွောငျးကို ဘယျလိုဘယျပုံ လုပျဆောငျပေးရမလဲဆိုတာ ကွညျ့နပေါတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး တခုခုပွောငျးလဲသှားမယျလို့ အာမခံထားခွငျး မရှိပါဘူး။
ဒါဟာ အငျတာနကျပျေါမှာရှိတဲ့အရာတိုငျးက ပြောကျပကျြသှားတယျဆိုတာ မရှိကွောငျး ကြှနျတျောတို့အားလုံးကို သတိပေးနသေလိုပါပဲ။ ဖကျြလိုကျတယျလို့ ပွောရငျတောငျမှပေါ့။ ဒါဆို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လုံခွုံစိတျခမြှုတှကေ . . .
Previous articleportrait mode တွေအကြောင်း ကြော်ငြာထားတဲ့ Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် iPhone ကြော်ငြာလေး
Next articleလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သတ္ထုလုပ်ငန်းငါးခုကို ပယ်ချခဲ့တဲ့ Apple